စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် . . . . . စာတစ်ကြောင်း၏ တန်ဖိုး ကိစ္စအကြောင်း သိကောင်းစရာ| ShweProperty
Article စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် . . . . . စာတစ်ကြောင်း၏ တန်ဖိုး ကိစ္စအကြောင်း သိကောင်းစရာ
စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် . . . . . စာတစ်ကြောင်း၏ တန်ဖိုး ကိစ္စအကြောင်း သိကောင်းစရာ
U Kyaw Zay Ya (Law) | 28 July 2015
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်တစ်ခု၏ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းသည် တန်ဖိုးအားဖြင့် ကြီးမားတတ်ပါသည်။ ရံဖန်ရံခါ စာလုံးတစ်လုံးသည်ပင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အဓိပ္ပာယ်ပြည့်၍နေပါသည်။ စာလုံးတစ်လုံးကို ဖြုတ်လိုက်ပါက စာ၏တန်ဖိုး ကျသွားနိုင်ပါသည်။ ဖြုတ်လိုက်သည့် စာလုံးနေရာတွင် အခြား စာတစ်လုံး အစားထိုးခြင်းဖြင့် စာ၏အဓိပ္ပာယ်ကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ထိုအခါ စာချုပ်၏တန်ဖိုးပါ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။
``ပြုရမည်´´နှင့် ``ပြုနိုင်သည်´´ဟူသော စကားလုံး နှစ်လုံးသည် အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် မူများစွာ ခြားနားလှပါသည်။ Shall နှင့် May သည် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုတွင် အရေးပါသောကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။ Shall သည် မပြုမနေရ ပြုကိုပြုရမည့်သဘော ဖြစ်ပါသည်။ May မှာမူ ပြုလ်ိုက ပြုနိုင်သည်။ မပြုလ်ိုက မပြုဘဲ နေနိုင်သည်ဆိုသည့်သဘော အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါသည်။
အလားတူ စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် စာတစ်ကြောင်း ကျန်ရစ်ခြင်း၊ ယင်းကျန်ရစ်ခဲ့သည့် စာတစ်ကြောင်းကြောင့် အခက်ကြုံရခြင်း၊ စာတစ်ကြောင်း၏ တန်ဖိုးကို သိစေနိုင်ခြင်းအလို့ငှာ နမူနာ ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်ကို ကောက်နုတ်တင်ပြပါမည်။
အရောင်းအဝယ်စာချုပ်တစ်ခုတွင် ဖြစ်ပါသည်။ ရောင်းသူက ဦးဘ ဖြစ်ပြီး၊ ဝယ်သူက ဦးမြ ဖြစ်ပါသည်။ ဦးဘ အမည်ပေါက်ပိုင် မြေကွက်ကို ကျပ်သိန်း(၁၀၀)တိတိဖြင့် ဦးမြက ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူကတိစာချုပ်တစ်ရပ် ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုပါသည်။ စာချုပ်ချုပ်သောနေ့တွင် ငွေကျပ် သိန်း(၂၀)ကို စရန်ငွေအဖြစ် ဦးမြက ဦးဘကို ပေးပါသည်။ တစ်လပြည့်သောနေ့တွင် ငွေကို အပြီးပေးချေရန်နှင့် ဦးဘက ဦးမြကို မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ပြုလုပ်၍ အပြီးလွှဲပြောင်းပေးရန် သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။
ဤသို့ ဦးမြမှ စရန်ငွေပေး ဝယ်ထားပြီးနောက်တွင် ထိုမြေကို ဝယ်ယူလိုသူများ ပေါ်ပေါက်၍လာပါသည်။ ဦးမြ စရန်ပေး၍ ဝယ်ထားမှန်းသိသဖြင့် ဦးမြအားပြန်ရောင်းပါရန် ဝယ်လိုသူတစ်ဦးက တောင်းဆိုပါသည်။ ငွေကျပ်သိန်း(၁၅၀)ပေး၍ ဝယ်ပါသည်။ ဦးမြလည်း အမြတ်ရသည့်အတွက် နောက်ဝယ်သူအား သိန်း(၁၅၀)ဖြင့် ရောင်းချလိုက်ပါသည်။ သို့သော် ဦးမြသည် မြေအမည်ပေါက်သူ မဟုတ်သေး။ သို့ဖြစ်ရာ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ကြီး ပြုလုပ်၍ ၎င်းထံမှ ဝယ်သူအား လွှဲပြောင်းမပေးနိုင်သေးသည့် အနေအထားဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဦးမြက ဦးဘအား အကူအညီတောင်းပါသည်။ တစ်လပြည့်သည့်နေ့တွင် ဦးမြမှ ငွေအပြီး ပေးချေပါက ဦးဘကလည်း ဦးမြသို့ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ပြုလုပ်၍ အပြီးလွှဲပြောင်းပေးမည်ဆိုသည့် သဘောတူညီချက်အတိုင်း တစ်လပြည့်သည့်နေ့တွင် ကျန်ငွေသိန်း(၈၀)ကို အပြီးပေးချေပါမည်။ သို့သော် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ပြုလုပ်ပြီး လွှဲပြောင်းရာတွင် မိမိအမည်အစား မိမိထံမှ ထပ်ဝယ်သူအမည်သို့သာ လွှဲပြောင်းချုပ်ဆိုပေးပါရန် တင်ပြပါသည်။
ထိုအခါ ဦးဘက စာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်အရ ဦးမြသို့သာ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခြားသူသို့ လွှဲပြောင်းမပေးနိုင်ကြောင်း၊ အခြားသူသို့ လွှဲပြောင်းပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သဘောတူညီမှု မရှိကြောင်းဖြင့် ငြင်းဆိုပါသည်။
အကယ်၍ ဦးမြညွှန်ပြသူ၏ အမည်သို့ လွှဲပြောင်းပေးရမည်ဆိုပါက စာချုပ်တွင် သဘောတူထားမှုမရှိသော အချက်ကို ပြုလုပ်ပေးရာ ရောက်ပါမည်။ ထိုအချက်ကို ပြုလုပ်ပေးစေလိုပါက ငွေ(၁၀)သိန်း ပေးရမည်ဟု ပြောဆိုလာပါသည်။
ဦးမြသည် ဦးဘ တောင်းဆိုသည့်အတိုင်း ငွေ(၁၀)သိန်းကို ပေးလိုက်ရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ကြီးချုပ်ရာတွင် ၎င်းအမည် မပါဝင်တော့သည်ဖြစ်၍ အမြတ်ခွန်ကိစ္စများစွာ လွတ်ကင်းသွားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍သာ ဦးမြသည် ဦးဘနှင့် ချုပ်ဆိုသည့်စာချုအ်တွင် အောက်ပါစာကြောင်းကို ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားခဲ့မည်ဆိုပါက ဦးဘ ထပ်တောင်းသည့် ငွေကို ပေးရန်မလိုဟု ဆိုရပါမည်။ ယခုမူ အောက်ပါစာကြောင်း ကျန်ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ဦးဘ တောင်းသည့် ငွေ(၁၀)သိန်းကို ဦးမြ ပေးလိုက်ရပါသည်။ ကျန်ခဲ့သည့် စာကြောင်းတစ်ကြောင်းသည် ဦးဘ တောင်းသောငွေ(၁၀)သိန်းနှင့် ညီမျှသောတန်ဖိုး ရှိနေပါသည်။
``ဦးမြမှ ငွေအပြီးပေးချေ၍ ဦးဘက မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ဖြင့် အပြီးလွှဲပြောင်းပေးရာတွင် ဦးမြ (သို့မဟုတ်) ဦးမြမှ ညွှန်ပြသောသူသို့ လွှဲပြောင်းပေးမည်ဆိုသော အချက်ကို ရောင်းသူ ဦးဘက သဘောတူပါသည်။´´ဟူ၏။
Ref : U Kyaw Zaya (Law)